Buulo Barde: Guryo ay leeyihiin saraakiil Alshabaab oo dab la qabadsiiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyo careysan ay dab qabadsiiyeen 2 guri oo ku yaallay degmadaas, islamarkaana ay lahaayeen saraakiil ka tirsan Alshabaab.
Falka lagu gubay labadaan guri ayaa ka dambeeyey kadib markii maalin ka hor tuulo lagu magacaabo Jameeco Shiino Alshabaab ku dileen nin deegaanka ka tirsan, islamarkaana gubeen gaari, dukaan iyo guri uu halkaas ku lahaa.
Qof ka mid ah dadka degmada Buulobarde oo wareysi siiye VOA ayaa sheegay in gubitaanka guryahaas ay timid kadib markii Alshabaab tuulada Jameeco Shiino ku gowraceen nin ganacsade ahaaa.
“Maalin ka hor ayaa rag ka tirsan Alshabaab waxey tuulo Buulo Barde u jirta 15KM ku gowraceen nin ganacsade ah, waxeyna gubeen hantidiisa sida: Guri, gaari iyo dukaan” ayuu yiri goobjoogahaas oo magaciisa u qariyey sababo amaan.
“Markii falkaas dhacay ayaa la gubay labo guri oo ay degmada Buulo Barde ku lahaayeen saraakiil ka tirsan Alshabaab, mid ka mid ah ragga guryahaas lahaa wuxuu ahaan jiray madaxa dacwada, waxaana guriga gubay rag loo yaqaano Macawisley oo ka dhaqdhaqaaqa deegaanada Miyiga ah, lana dagaalama Alshabaab” ayuu sidoo kale yiri goojoogahan.
Goobjoogahan ayaa sheegay in guryaha la gubay ay bas beeleen, wuxuuna xusay in markii hore guryahaas laga wareegsanayey, hase ahaatee la gubay kadib markii Alshabaab dileen nin ganacsade ah, islamarkaana hantidiisa gubeen.
Gubitaanka guryaha Alshabaab ayaa ah mid ku cusub deegaanada iyo magaalooyinka ururkaas horay looga saaray.